သစ်ခက်သံလွင် ကဗျာသုံးသပ်ချက်၊ ကိုနိုင်း ၏ ''လွတ်လပ်လှိုင်းခေတ်ပေါ်ကဗျာများကိုကြိုဆိုခံစားကြည့်ခြင်း(အဆက်) ''
on December 29, 2017 သက်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍ - Articles myat hlaing
ပြတင်းတံခါးအဖွင့် ဇာခန်းဆီးအလွင့်( ၄၃ )
နှစ်ပေါင်းငါးဆယ်ကြာမှပြန်လည်ကျင်းပခွင့်ရတဲ့ စာပေညီလာခံကြီးကို အောင်မြင်စွာကျင်းပပြီးစီး သွားပါပြီ။ ဒီစာပေညီလာခံကြီးမှာစာပေဆိုင်ရာ နယ်ပယ်အသီးသီးမှစာတမ်းတွေတင်ကြ၊ ဆွေးနွေး ကြ၊ အဆိုတွေကို မဲပေးဆုံးဖြတ်ကြနဲ့ပေါ့။ မဲပေးဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့အဆိုတွေကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရရဲ့ ပြည်ထောင်စုအဆင့်ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဆီတင်လိုက်ပြီး အဆုံးအဖြတ်ခံယူပါတော့မယ်။
ပြည်ထောင်စု ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးကအဆုံးအဖြတ်ပေးပြီးပြန်ချမှာကိုတော့ စာပေညီလာခံဦးဆောင် ကျင်းပတဲ့ဗဟိုကော်မတီကလုပ်ငန်းစဉ်တွေရေးဆွဲပြီး အကောင် အထည်ဖော်ရတော့မှာပါ။ ကျန်တဲ့ စာပေအပိုင်းတွေထားပါတော့။ ကဗျာနဲ့ပတ်သက်တာကိုပြောချင်ပါတယ်။
ကျောင်းသင်ခန်းစာ ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်တွေထဲမှာ ခေတ်ပေါ်ကဗျာကိုထည့်ဖို့အဆိုကို အပြည့်အဝဆို သလောက် ထောက်ခံလိုက်ပါတယ်။ ဒါဟာ အင်မတန်မှကောင်းတဲ့အဆိုပါပဲ။ တခုရှိတာကခေတ်ပေါ်ကဗျာကို အထက်တန်းအဆင့်ကျောင်းသားတွေစိတ်ဝင်စားရဲ့လား။ စိတ်ဝင်စားရင်တောင် ခံစား နားလည်နိုင်ပါ့မလား။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကိုမေးကြည့်တဲ့အခါ ကျောင်းသား ၁၀၀ မှာ တယောက်တောင် စိတ်မဝင်စားတဲ့အခြေအနေ ဖြစ်နေပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားခဲ့ရင် ခံစားနားလည်နိုင် အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက် ဆက်ဆောင်ရွက်လို့ရနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ပြောချင်တာက ခေတ်ပေါ်ကဗျာကို လူငယ်ကျောင်းသားတွေ စိတ်ပါဝင်စားလာအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ၊ ဘယ်လိုစည်းရုံးသွေးဆောင်နိုင်မလဲဆိုတာပါပဲ။ အခုအချိန်မှာခေတ်ပေါ်ကဗျာ စာအုပ်တအုပ်ထုတ်နိုင်ဖို့အရှုံးခံပြီး ထုတ်ဝေနေရတဲ့အခြေအနေပါ။ ကျောင်းသင်ခန်းစာမှာပြဋ္ဌာန်း လိုက်ရင် ကျောင်းသားတွေစိတ်ပါဝင်စားပါမှအောင်မြင်မှာပါ။ ကျောင်းသင်ခန်းစာတွေထဲထည့် ပြဋ္ဌာန်းလိုက်ပြီး ကျောင်းသားတွေ စိတ်မဝင်စားရင် ပြဋ္ဌာန်းထားတာပဲရှိပါလိမ့်မယ်။
ခေတ်ပေါ်ကဗျာနဲ့ပတ်သက်လို့တွေးလိုက်မိတာကိုပြောတဲ့သဘောပါ။ လွတ်လပ်လှိုင်းခေတ်ပေါ်ကဗျာတွေ ကို ဆက်ခံစားကြပါစို့။ လွတ်လပ်လှိုင်း အွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်းဟာ ကလောင်အစုံနဲ့ခေတ်ပေါ်ကဗျာအကြောင်း အရာပေါင်းစုံ၊ ပုံသဏ္ဍာန်မျုးစုံကိုဖတ်ရှုခံစားခွင့်ရလိုက်ပါတယ်။
ဒီအကြောင်းအရာပေါင်းစုံနဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးစုံထဲက ခေတ်ပေါ်ကဗျာထဲမှာ ခံစားမိတဲ့ကဗျာတစ်ပုဒ်ကတော့ ကဗျာဆရာသင်းရည်လွင် ရဲ့ လွတ်လပ်နိဒါန်း ပါ။
ဒါကို ညတွေက မမေ့ဘူး။
မင်းဟာ လမ်းနံဘေး ရေအိုးစင်လား
ဒါ အိပ်မက်လို သစ်နေတုန်း
ငါ့ ခြေရာတွေ ရှာဖို့။
ဒီကဗျာကိုဖတ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝညတွေကိုပြန်သတိရလိုက်မိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ညတွေနေ့တွေဟာ အထီးကျန်ဆန်ခဲ့ရတယ်။ ဒုက္ခယန္တရားကြီးထဲမှာ တပတ်ပြီးတပတ်လည်ပတ်နေခဲ့ရတယ်။ ဒီဒုက္ခယန္တရားကြီးထဲကထွက်ဖို့ ထွက်ပေါက်ကိုရှာရင်းနဲ့ထွက်ပေါက်ပျောက်နေခဲ့ရတယ်။
အမှောင်ညတွေကို လမ်းမသိပဲလျှောက်ခဲ့ရတဲ့ခရီးရှည်ကြီးတခုလိုပါပဲ။ ထမင်းသိုး၊ ပေါင်မုန့်ဆို ပေါင်မုန့်သိုး သွားကြမှာပါပဲ။ နောက်ဆုံးနံရံတွေကို ဖြိုဖျက်ဖို့အတွက်ကလည်း အင်အားအခိုင်အမာရှိဖို့လိုအပ်နေပါသေး တယ်။ သောင်ပြင်မှာကျကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ခြေရာကိုပြန်ရှာနေသလိုပါပဲဆိုတာကိုတော့ ကဗျာဆရာက အတိ အလင်းပုံဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ တချိန်က ထောင်နံရံမှာရေးခဲ့တာကိုပြန်တွေးမိရင်း၊ ကဗျာဆရာ မိုးသက် ငြိမ်ဦး ရဲ့ ”မော်စကို” ကဗျာကို ဖတ်လိုက်မိတယ်။
လျင်သူစားစတမ်း အ,သူ ခံစတမ်း မော်စကို
ငွေပေးရင် ဘုရင်တပါးလို စံစားနိုင်တဲ့မော်စကို
ငွေမပေးရင် သေစာရင်းသွင်းဖို့ အမြဲအဆင်သင့်ဖြစ်နေတဲ့ မော်စကို
မော်စကိုသူ မော်စကိုသားတို့ရဲ့အသက်ဟာ ဝင်စာပဲ။
ပုံမှန် ဝင်စာ မလာနိုင်ခြင်းဟာ
ခြေသုတ်ပုဆိုး မြွေစွယ်တွေလည်း ကျိုးစေတယ်
ကျောင်းကြီးတခုလို မော်စကိုက သင်ပေးလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာသိကြတဲ့အတိုင်း မော်စကိုဆိုတာထောင်ကိုခေါ်ဝေါ်သုံးနှုန်းကြတယ်ဆိုတာကို။ ကဗျာဆရာပြောတဲ့အတိုင်း မြန်မာပြည် က အကျဉ်းထောင်ထဲကအကြောင်းတွေကို မီးမောင်းထိုးပြလိုက် တာပါ။ ထောင်ထဲမှာထောင်ဝင်စာလာဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ထောင်ဝင်စာလာရင် အရာရာကိုငွေပေးဝယ် လို့ ရသလိုပါပဲ။ ဆေးပေါလိပ်ဆိုတာကလည်း လဲလှယ်ရေးငွေကြေးတခုလိုဖြစ်နေပါတယ်။ ငွေပေးရင် ဘုရင်တပါးလို စံစားနိုင်တဲ့မော်စကို၊ ငွေမပေးရင် သေစာရင်းသွင်းဖို့အမြဲအဆင်သင့်ဖြစ်နေတဲ့မော်စကို ဆိုတဲ့ကဗျာစာသားလေးတပုဒ်ဟာလည်း ထောင်တွေထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှန်ကိုပြသွားပါတယ်။
ငွေအရေးကြီးပုံနဲ့ထောင်ထဲမှာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမရှိပုံတွေ၊ ထောင်အတွင်းမှာ ဥပဒေက ပြင်ပ ရောက်နေ ပုံတွေကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ပြောမယ်ဆိုရင် မော်စကိုဆိုတဲ့ထောင်နဲ့မြန်မာပြည်ကြီးက အတူတူဖြစ်နေပါ တယ်။ ထောင်အပြင်လောကမှာ လည်း ငွေများတရားနိုင်ခေတ်ကြီးကပြည်သူတွေရဲ့ဆင်းရဲမွဲတေမှုကို ဝါးမြိုပစ်နေပါတယ်။ ဥပဒေရဲ့ပြင်ပကိုရောက်နေပါတယ်။ ဒါတွေဟာ လောကရဲ့ လောကဓံတရားတွေပါပဲ။
ဒါကို ”ခြေသုတ်ခုံမှာရပ်နေတဲ့ဖိနပ်ကလေးတရံ” ဆိုတဲ့ခေတ်ပေါ်ကဗျာနဲ့ရေးဖွဲ့ပြသွားသူက ကဗျာဆရာ ကိုသက်အောင်ပါပဲ။
လောကဓံ ခွာသံတွေကို နားရည်ဝနေတဲ့
အခု … သူ
ဘုရားရင်ပြင်တော်အောက်က ခြေသုတ်ခုံမှာ ရပ်နေတာပါတဲ့။
ခြေသုတ်ခုံအမျိုးမျိုးမှာရပ်ခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင် ကြေကွဲစရာဇာတ်လမ်းတွေကို တွေ့ရပါ လိမ့်မယ်။ ဒီခြေသုတ်ခုံတွေပေါ်မှာ ရပ်နေခဲ့ရတဲ့ဘဝလေးတွေကို ကျွန်တော်တို့မကယ်တင်နိုင်တာကိုတွေး လိုက်မိရင် ရင်နာစရာအလွန်ကောင်းပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ ကဗျာဆရာရေးသလို ဘုရားရင်ပြင် တော် အောက်က ခြေသုတ်ခုံပေါ်မှာ ရပ်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းနေရုံပါပဲ။
The Sun Rays-Vol 1. No 179. 23 Dec 2017
ပထမပိုင်း - http://www.jojar.net/2017/12/blog-post_17.html